WIFI Backup Kamera yeRori
Shenzhen Sunveytech Co.,LTD [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Markets: Americas , Europe , Worldwide Exporter:71% - 80% Certs:CE, FCC, RoHS Tsanangudzo:IOS Backup Kamera yeRori,Iphone Backup Kamera yeRori,Android Backup Kamera yeRori
Home > Products > Wireless Backup Kamera Systems > Wifi Backup Kamera > WIFI Backup Kamera yeRori
Muenzaniso Nha.: SV-612WF
Iyi wifi mota backup kamera inobatanidza isina waya kune yako smartphone ichikubvumira kuti uone iyo kamera kamera pane yako smartphone screen!
Mvura isina backup kamera kamera ine 28 infrared leads uye yakavakirwa-mukati meWiFi transmitter inobatanidza kuburikidza ne WiFi kubatana.
Iyo ine nyore kumisikidza, nyore kubatana, mashoma kushandisa magetsi, hapana flicker, hapana kukanganisa, ane mavara uye anoona, uye anogona kushandiswa zvakanyanya mukusiyana mota.
Kuti utarise kamera pane yako smartphone, ingo tora iyo yemahara SWD Camera app kubva kuApp Store kana kuti My Cam app kubva kuGoogle Play Store.
WiFi yekubatanidza - chigadzirwa chinotora yazvino motokari wifi yekunongedza kunongedzera isina waya yekubatanidza tekinoroji. Hapana kana chekukanganiswa nezvimwe zvisina waya.
Kuisa nyore-kuchengetedza yako yekuisa chirongwa uye yekumisikidza mutengo, hapasisina yakaoma wiring.
Kamera yakashongedzwa neIP68 Weatherproof rating, yakagadzirwa uye kuyedzwa kune yakanyanyisa mamiriro ekunze. 12 infrareds inoratidza yakajeka mufananidzo pane yako smart foni usiku.
App paApp Store uye Google Play Store.
Masimba mashoma mashandisirwo emagetsi, vhoriyamu kubva ku9-36V DC simba, inoshanduka mota inoenderana.
Usati waisa, ita shuwa kuti unobatanidza tambo yemagetsi uye antenna kamera.
Nhanho 1: Sarudza nzvimbo dzekamera.
Nhanho yechipiri: Isa tambo dzese mumota, kana zvichidikanwa gomba diki rinofanira kudhonzwa kuti ipfuure iyo tambo yemagetsi kuburikidza nemadziro emota.Pakati peiyo bracket inosimuka painoshanda.
Nhanho 3: Tsvaga mwenje unodzosera kana magetsi anomhanya waya pamotokari yako.Ingangoda kubvisa iyo yemukati gadziriro kuti uwane. Unganidza iyo tsvuku waya yegetsi yemagetsi kune iyo yakanaka uye dema waya pasi.
Kana iwe uri kushandisa ACC kupidigura kamera, iwe unofanirwa kutanga mota yako uye kana iwe ukapa simba kamera ine reverse mwenje, iwe unofanirwa kuisa mota yako kumashure.
Mushure mekunge maisa kamera, iwe unofanirwa kuvhura wifi runyorwa rwezvishandiso zvako.Ndokumbira utsvage nzvimbo inopisa iyo inotanga neWDD uye uibatanidze.Kana iwe ukasawana iyo, pamwe une chimwe chinhu chisina kunaka mu kamera wiring. Ndokumbirawo utarise kamera wiring zvakare.
Product Categories : Wireless Backup Kamera Systems > Wifi Backup Kamera
Kunze IR Night Vision Wifi Backup Kamera Yeiyo iPhone iPad Android Foni
Night Vision Waterproof uye Shockproof Wi-Fi Rear View Kamera ye iPhone iPad Android Foni
Vehicle Safety Vision Equipment Rearview System Wi-Fi Kamera
License Frame Kamera WiFi
License Plate WIFI APP Wireless Rear View Kamera
Wifi APP Inodzosera Kamera yeMota
IOS Backup Kamera yeRori
Iphone Backup Kamera yeRori
Android Backup Kamera yeRori